UBHAKA ngesikhathi enomcimbi emzini wakhe eMalvern asewuphendule indawo yobumnandi Isithombe: SITHUNYELWE
Thokozani Ndlovu | October 19, 2021
UMELAPHI oke waphatha nabaculi uBhaka Nzama usephendule umuzi wakhe oseMalvern indawo yokuba nemicimbi yobumnandi.
Lokhu kuza emuva kokuba ebe nomcimbi obunabaculi bowokholo enkonzweni ebizwa ngeBack to the sender yebandla lakhe i-Ekuphileni Ministries ngoMgqibelo.
Uthe usethathe isinqumo sokuthi umuzi wakhe awuphendule indawo yokuba nemicimbi yobumnandi njengoba esakhe nezindawo zokuba nalo lonke uhlobo lomcimbi kuwona. Lokhu uthe ukwenza ngenhloso yokuthi abantu bangaze bakhathazeke ngokuyofuna izindawo ezizomba eqolo edolobheni ebe enomuzi omkhulu ngalolu hlobo.
“ Yize kuyindawo eseilungwini kodwa omakhelwane abaphazamiseki ngomsindo ngoba indlela engiwakhe ngayo umsindo awuphumeli ngaphandle. Nabo omakhelwane sixoxisene nabo futhi abanankinga. Uma kuzoba nomcimbi ngiyabazisa kanti nakubona ngivule izandla ukuthi babenemicimbi yabo emzini wami,” kusho uBhaka.
NgoMgqibelo bekugcwele kunyinyitheka emzini kaBhaka kukhona abantu abebeze enkonzweni abenayo, athe iyona akhombisa ngayo ukuthi indawo isiyasebenziseka ukuba nemicimbi. Bekukhona nabaculi abebenandisa enkonzweni yakhe omunye wabo okunguJumbo, oshiye abantu bengawuvali umlomo ngenxa yekhono lakhe emculweni.
Kuphinde kwanandisa noMjosty ogcine eseba ne-After Party yeGoduka Music Festival okungumcimbi wakhe abewethula ngokusemthethweni ngoMgqibelo. Amanye amaciko abezimazisile uDJ Mngani noLucky Cele we-Avante.
UJUMBO noBhaka ngesikhathi besenkonzweni iBack to the sender yaseKuphileni Ministries Isithombe: SITHUNYELWE